Meesha ugu fiican ee in la helo heshiis movie Lugood iyo Kiraynta waa in Lugood Store codsiga Lugood ugu on your computer. Haddii aadan ayaa codsiga lagu rakibay, waxaad u baahan doontaa inaad u tagto ka Lugood bogga internetka iyo download it. Haddii loo maleeyo in aad horey u codsiga lagu rakibay oo ku gartaan si loo furo, raac tallaabooyinka hoose si ay u helaan qaybta Movies dukaanka Lugood.
Qaybta 1aad: Sida loo helo qaybta Movies dukaanka Lugood
Qeybta 2: Sida loo helo filimada Lugood free
Qeybta 3: Intee in le'eg yihiin Movies on Lugood
Qeybta 4: Sida loo helo codes movie Lugood
Qeybta 5: Sida loo kala jeexjeexay laba filim Lugood ah
Tallaabada 1 - Open Lugood dibna dooro Lugood Store .
Tallaabada 2 - In dukaanka Lugood, dooro Movies dib u soo ceshano badan oo xul ah filimada. Waxaad awoodi doontaa in dhirtuba darajooyin kala duwan oo qaybaha.
Tallaabo 3 - Hadda, isticmaalaan Movies ama Categories soo daadiyaa menu soo koobto aad goobidda oo ku salaysan ku sifayn.
Si aad u hesho filimada free qaybta Movies ee Lugood waa adag, laakiin waxaa jira Chine oo lacag la'aan ah in aad kala soo bixi kartaa si uu u daawado filimada free aad iPhone ama iPad, laakiin waxaad u baahan doontaa in uu sameeyo baarista ah in la helo mid ka mid sax ah. Raac tilmaamaha hoos ku qoran si aad u ogaato Chine oo lacag la'aan ah si uu u daawado filimada lacag la'aan ah.
Tallaabada 1 - In sanduuqa raadinta Lugood, nooca " filimada free "ka dibna geli. Natiijada ayaa ku tusi doonaa liiska barnaamijyadooda filimka lacag la'aan ah in aad kala soo bixi kartaa in aad iPad ama iPhone.
Fiiro gaar ah: Crackle tusaale ahaan, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u daawadaan filimada ku saabsan qalabka telefoonada gacanta ama aad telefishinka haddii aad qabto TV Apple. Crackle tusaale ahaan, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u daawadaan filimada ku saabsan qalabka telefoonada gacanta ama aad telefishinka haddii aad qabto TV Apple.
Tallaabada 2 - Riix app in aad jeceshahay in aad ka soo dejisan iyo xaqiijiyo account Lugood ay galaan ID Apple iyo password aad. Markii hannaanka lagu hubinayo waa dhameystiran, codsiga la soo bixi.
Waxa intaa dheer in degsado barnaamijyadooda si uu u daawado filimada lacag la'aan ah, waxa kale oo aad ka daawan kartaa free TV muujinaysaa in Lugood doorataa TV muujinaysaa, ka dibna Free TV dhacdooyin in TV ku muujiyaa qaybta Quick Links.
Waxaa jira waxyaabo kala duwan in loo go'aamiyo qiimaha filim on Lugood. Qiimaha waxaa caadi ahaan ku salaysan in filimada yihiin, amar cusub ka hor, blockbusters, Oscar guuleysatay, ama guraa. Movies New iyo pre-si tusaale ahaan sida caadiga ah ku kici badan filimada ka weyn, halka blockbusters iyo Oscar guuleystay inkastoo da'da, wuu kala duwan yahay sicirka. Qiimaha filimada guraa badan yahay, maxaa yeelay, filimada kala duwan yihiin marka la isku daro in heshiis xirmo.
Halkan waa burburka ah ee kala duwan qiimaha filimada on Lugood.
Movies waaweyn ku kici meel kasta ka soo $3.99 ilaa $ 9.99.
Pre ku amray oo releases cusub dhexeeyaa $12.99 ilaa $19.99.
Blockbusters iyo Oscar guuleysatay dhexeeyaa $12.99 ilaa $19.99.
Movies guraa bilaabo qiyaastii $19.99.
Dhammaan qiimaha dhamaadka maalinta waxay ku salaysan yihiin cadeynayaan, caan, iyo abaalmarinta in filimada waxay heleen. Waxaa jira qiimo go'an filim lahayn. Waxaa jira waxyaabo kala duwan in loo ogaado sida badan filim ku kici doonto.
Si aad u ogaato sida inta badan kharashka filim, kaliya dooro filim ee Movies qaybta. Waxaad si toos ah bogga filimka. Qiimaha filimka lagu tilmaamayaa hoos ku image filimka.
Waxaad ka heli kartaa filim Lugood ama codes furashada ka DVDs la Lugood koobi digital. Waxaad iyaga ku iibsan kartaa ugu badnaan online iyo dukaamada tafaariiqda offline. Haddii aad qabto DVD / Blu disc ah ray la Lugood nuqul digital oo jeclaan lahaa inuu soo furto, raac tilmaamaha hoos ku qoran.
Tallaabada 1 - Lugood Open oo ka dibna riix on Lugood Store .
Tallaabada 2 - In ka Quick Links qaybta ku saabsan Home page, guji furo .
Tallaabo 3 - In Calaamada sanduuqa wada hadal, geli ID Apple iyo Password aad ka dibna riix Sign In .
Tallaabada 4. Ku qor code 12-god in waxa uu ku yaalaa on warqadda la socota DVD ama Blu disc ray.
Talaabada 5 - Marka aad samaysay, taabo gala / fure u noqon. Sanduuqa hadal A furi doonaa oo u oggolaan doonaa in aad kala soo bixi filimka.
Lugood ogolaado in aad kiro filimada ka Movies qaybta dukaanka Lugood. Waxaad kiraysan kartaa filimada ka madax banaan oo waaweyn oo istuudiyaha Hollywood. Waxaa jira xulasho ballaaran ka darajooyin kala duwan oo aad u isticmaali kartaa iyada oo loo marayo on your computer ama qalab mobile.
Si aad wax badan oo ku saabsan kiraysiga filimada on Lugood bartaan, dooro Gadashada Movies Kireeysasho & in ay Movies Links Quick qaybta. Boggan wuxuu bixiyaa macluumaad ku saabsan dhammaan kaalmooyinka lagu kireysto iyo iibsashada filimada ee Lugood.
Haddii aad jeclaan lahayd in aad kiraysato movie Lugood ah, guji filimka si aad u jeclaan lahaa in aan kiraysto oo ku yaal qaybta Movies ee dukaanka Lugood. Bogga filimka, dooro qiimaha kirada ka dibna geli ID Apple iyo password aad si loo xaqiijiyo kirada.
Waxaa jira heshiisyo badan oo filim iyo Kiraynta heli karaa Lugood, laakiin waa in aad ka raadin iyada oo qaybaha iyo qaybaha ee Movies qaybta. Waa inaad sidoo kale dhirtuba xidhmo movie iyo fiiro u dalabyo sale xadidan. Munaasabada tufaaxa waxay bixisaa heshiisyo ku saabsan ka hor amar ku bixiyay, releases cusub, iyo filimaan guraa.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa heshiisyo movie Lugood qiimo dhimis on websites kale.
Sida loo Edit Lugood metadata (MP4, MOV, AVI, MKV, iwm)
Top 5 talooyin aad u baahan tahay wax ka ogaato la yaabtid video qabashada
Top 10 Easy Video Joiner lagu bedelan karo
> Resource > Video > Sida loo Helo u Khayr Lugood Movie Heshiisyada iyo Kirada mulkiilayaasha